င ဝန် န ဒီ: November 2012
သန္ဓေ ဆိုတာလည်း သိပ်မထူး ပါဘူး
ယုတ် ဆိုတာလေး ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ 
အတော် ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပေါ့
အဲလို လူတွေနဲ့က လူမိုက်ထက်ဆိုးတယ်
ပေါင်းတဲ့သူ ဆက်ဆံတဲ့ သူ အတွက်
ယုတ်မာသူ အားပေးဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပါ အကျိုးယုတ်ပါတယ်
လူမိုက် အရိပ် က ပေါင်းသူ ကို အရိပ်မထိုး တတ်ပေမဲ့
အထက်ပါ နှစ်မျိုးပေါင်းထားသူ က
အရိပ်ရော အခက်ပါ အချိုးခံရပြီး
တသက်လုံး သေရာပါပဲ လူတိုင်းစိတ်မှာ ပြောဖို့ မသင့်အောင် ကို
မြန်မာပြည်သား ဆို တော့
လုပ်သူ က ဘာမှမဟုတ်ပေ မဲ့
မေးကြည့် ပါ မဆိုင်ကြပါဘူး
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:19 PM No comments:
အရမ်းတော် လိုက်တာ ဘယ်လို တွက်တာလည်းမသိ ပိုသက်သာတယ်တဲ့
ဆက်သွယ်ရေးက အင်ဂျင်နီယာ ကပြောတယ်တဲ့
အခုနှုန်းထား အသစ် က ပိုသက်သာ မယ်တဲ့
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် က အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ ရတာဆိုရင်
သင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာတွေ မျက်နှာထောက်ပြီး
ဘာမှ မပြောတာ ကောင်းလိမ့် မယ်ထင်တယ်
အရင်က တစ်မိနစ် ကို ၄ ကျပ် တနာရီ ကို ၂၄၀ ကျပ်
အခုကောက်မှာက ၁၀၀ kb ကို ၂ ကျပ်
အဲဒီ အင်ဂျင်နီယာ ပြောတဲ့ သတင်း ကို တင်ထားတဲ့ www.burmese.dvb.no က သတင်းကို သွားဖတ်တာ မဖတ်ရသေး ဘူး အင်တာနက် ဝင်ရုံနဲ့ 
ဓာတ်ပုံနဲ့တင်ပေးလိုက်မယ်
၂၂၇ kb. လက်ခံ က ၅.၆ Mb
နဲ့ကို တတ်သွားတာ တမျက်နှာထဲနော်ဘယ်လောက်ကျလဲ တွက်သာကြည့် ဖုန်းကဒ်ထဲ တစ်သောင်းထည့်ထားရင် တနာရီမကြာဘူး ကုန်ရော
၁ Gb ကို ၇၀၀၀ ကျပ် နှုန်း ဆိုလည်း စာမျက်နှာ ၂၀၀ လောက်ဖတ်ပြီးရင် ကုန်ပြီ
ဖုန်းပြောရင် တော့ တစ်ပတ်လောက်တော့ ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်
တရက် ကို ၃ မိနစ် လောက်ပေါ့ ဗီဒီယို လေးနဲ့ ဆိုရင်ပေါ့
Viber စကားပြောတာ ဆို အထွက် ၂၇၀ kb အဝင် က ၉၈ kb တမိနစ် ကို ၄၀၀ kb တတ်နေရော
Viber သုံးရင် တမိနစ် ကို ၈ ကျပ်ဖြစ်နေပြီ
တနာရီဆို ၄၈၀ ကျပ်ဖြစ်နေပြီ
မြန်ပြည် မှာ ရှာတဲ့ ပိုက်ဆံ ဖုန်းဖိုး ပေး ရေသောက် ဗိုက်မှော က် ကိန်းနော်
ဆက်သွယ်ရေးချမ်းသာ ပြည်သူ မွဲ ခရိုနီအောက်ဆွဲ အင်ဂျင်နီယာ များ ပပျောက်ပါစေ. မြန်ပြည်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ခရိုနီထမင်းမှ မဟုတ် ဆန်မရှားသလို ရိုးသားသူတွေ ချမ်းသာနေတာ အများကြီးပါ
ပြောလိုက်ရင် နိူင်ငံတကာနှုန်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာ လစာ က အခြေခံလူတွေ က မြန်မာငွေ ၅ သောင်းကျပ်ပဲရတာ
နိူင်ငံတကာမှာ အသက်၇၀ ကျော် အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေ အပျင်းပြေ အလုပ့် လုပ်တာ တနာရီ ကို မြန်မာငွေ တစ်သောင်း တစ်လ ကို ငွေ ၁၀ သိန်း ကနေ သိန်း ၂၀ သာသာလေးရတာ
အင်တာနက်ဖိုးက ၄ နာရီ စာ လုပ်အားခပဲရှိတာ မြန်မာပြည် မှာ နိူင်ငံတကာနှုန်းနဲ့ဝင်ငွေရဲ့တရက်စာ ယူအုံးတော့. ၂၀၀၀ ကျပ် ကို ကြိုက်သလောက်သုံးဖြစ်ရမှာပေါ့
နိူင်ငံတကာဆိုတာ ဘယ်နိူင်ငံကို ပြောတာလဲမသိ
အတိအကျ ပြောဖို့ လို လေပြီ
ဒီမှာတော့ တစ်လ ကို 3G နဲ့ကို ၅Gb အထိ ကျော်တောင်ကျော်သေးတယ်
ဒါအိမ်မှာ Wifi ချိတ်ပြီးသုံးတာ မပါလို့ 
ညနေ ၅ နာရီ ကျော် ကနေ နံနက် အထိ 3G သုံးတာမဟုတ်သေးဘူး
If I stay one day,he can do me faceoff.
World number one visit Myanmar for6hours.
Return within before Full Moon day and evening of that day.
I hope if I stay one day,
I really return with faceoff.
I so lucky for stay6hours.
Warmly welcome to see Hell at Myanmar really Hell
If you want to see hell, Our country warmly welcome to show it at full Moon day.
Our Democracy it free to do hell so easily.
Visit Hell year at Myanmar.
But we never safe for your life and your return home it without face.
Myanmar (old name Burma)
Posted by ငဝန်နဒီ at 5:33 PM No comments:
အခု မုန်လာဥ အခု ကန်စွန်းဥ နောက်ဆုံး မီးလောင်ဖု ကသက်သေ
မီးရှို့ တာ က မီးရှို့ တာပါ အခု မုန်လာဥ အခု ကန်စွန်းဥ လုပ်မရပါ
ခြစ်တာမှ အရေခွံတောင် လန်သွားသည်
ဖုတ်စား တာ ကမှ ကောင်းသေးသည်
ဖုတ်စားတာ က အနံ ဆိုးသော လည်း ရှောင်ကျဉ်၍ရသည်
ရေနွေးပူ အကုန်ရောပြုတ်သဖြင့် မသက်သာလှပါ
မီးဖုတ်သည်က နာမည်ဆိုးသောကြောင့် ဝေးဝေးနေလို့ ရသည်
နောက်ဆုံးတော့ အကုန် ပူပူလောင်လောင်ကြီးသာ
အတူတူ နှင့် အနုနူသာဖြစ်တော့သည်။
ကဲ အခု ဘယ်သူမြန်ပြည် ပြန်မလဲ
ဘယ်ပညာတတ်တွေ ဘယ်လို လူတွေ မြန်ပြည် ပြန်မှာလဲ
အစိုးရ အချိန်မရွေး သိမ်းပိုက်မှာနော် မြန်မြန်လာထား
ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ပြန်ချင် မြန်ပြည် လာလည်ပါ
အကုန်ချွတ်ပြန် ဖို့အာမခံ ပါတယ်
ကိုယ့်နိူင်ငံ မို့ ပြောတာ မဟုတ် ရဲရဲ အာမခံပါသည်
မီးရှို့ ပြန်သူ ပြီးတော့လန်ကွတ်တီ အိမ်အပြန်ပေါ့
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:45 PM No comments:
မြန်ပြည် အရက်စက်ဆုံး ဓာတုပစ္စည်း သုံး နိမ်နှင်းမှု
“မျက်ရည်လည်းမကျဘူး။ မျက်လုံး ပူစပ်တာလည်း မဖြစ်ဘဲ ထိတဲ့ဒဏ်ရာ မှာ ဖြစ်စက ပူတယ်။ ပွတ်လိုက်တော့ မီးလောင်သလိုမျိုး အကွက်။ အဖုလည်း မဟုတ်ဘူး”
ဓာတု လက်နက် အကြမ်းမဖက်ပြည် သူနိမ်နှင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ် လက်နက်
ရခိုင်မှာတုန်းက တော့ ပြည်သူတွေသေလေ ဒီမိုကရေစီအစိုးရအကြိုက်ပေါ့
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:34 PM No comments:
Myanmar: Riot police fired people
Myanmar Riot police fired protest
မြန်ပြည် ဒီမိုကရေစီ လက်တွေ့ သရုပ်ဖော်ပြီ
ဒီမိုကရေစီ ကို မြန်ပြည်ပြည်သူတွေ ရေးဖို့ လိုလေပြီ
သားသတ်သမားသည် သားသတ်မှ သူ့ ဝမ်းရေးအဆင်ပြေ သလို ငါးရောင်းသူသည် ငါး အရှင် ကို သတ်ရောင်းသူသာ ဈေးကောင်းရပေမည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 5:41 PM No comments:
ထိပ်တိုက် တွေ့ မယ်ဆိုရင်
နောက် ဖက်မှ တိကျသော အချက် အလက် အပြည့် အစုံ
ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည် မှာ
၂ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ဤ ၃ ခု ခွင့်ပြုချက် အရေးပါပေသည်။
လူ အသက်တစ်ချောင်း ဆုံးရှုံး မှုသည် နိူင်ငံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းသွေဖယ်စေသော အပြုအမူသာ ဖြစ်ပေသည်။
တရားစီရင် ခြင်း သည် အကောင်းဆုံး အဖြေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ပြည်ထောင်စု ကို အသက်ပေးကာ ကာကွယ်မလေ။
မြန်မာပြည် မြေ အတွက် အသက်ပေးကာကွယ် မည့်သူများအတွက် ကမ္ဘာမကြေ
ဒီမိုကရေစီ ဆို ပြီး မြန်ပြည်မြေ ကို မြန်ပြည်သားတွေ အသက်ပေး ကာကွယ် နေရတုန်း သူတွေအတွက် လေးစားစွာဖြင့်
မြန်ပြည်သမိုင်း မြန်ပြည်သားတွေသာ ရေးသည်။
ရခိုင် အရေးတုန်းကတော့ လက်နက်ပျောက်နေ
လက်နက်မဲ့ ကို သတ်ဖို့ဝန်းမလေးတာ
မြန်ပြည် ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံ ပေါ်လာပြီ
ဒီမိုကရေ စီ အင်းအား တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပြီး. တရားရေး က အမှန်တရားပေါ်ပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:13 PM No comments:
စာတွေရေးတော့ တချို့ ဟာတွေက ရေးချင်တာတွေရေးလိုက်တာ ဘယ်လို အတွေးတွေ ဘာ အတွက်ရေးတာ တွေ ကို ဘာသာ ပြန်ဖို့ လို လာ တာ ကို တွေ့ နေရပါတယ်
တလော က ဆူနာမီ က မညာ ဘူး ဆိုတာ ရေးလိုက်တာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှားတယ်လို့ထင်တဲ့ သူ က ထင်လာတာ တွေ့ ရတော့ ဘာပြောရမှန်း ကို မသိ။
မညာ တာ ကို ဆို လို ချင်တာ က မှန်မှန် ကန်ကန် ဆူနာမီ ကို ဆို ချင်တာ ပါ
ဆူနာမီ ကောင်းတာတွေသယ်လာတာမဟုတ် ရေနဲ့ ဝါးမျို ဖို့ လာတာ အသေအပျောက် များများ
လုပ်သူပါ ပြီးရင် သူ မဟုတ်သလို နဲ့ 
ညှာတာ မှုမရှိ လို့တော်တော် များများ က ထင်တာ
မညာဘူး မလိမ်ဘူး တည့်တည့်ဝါးဝါး ပြီးမှ နောက်ပြန်ဆုတ်တာ ဆိုတော့
မညှာတာထက်ဆိုးလို့မညာဘူး လို့ရေးတာပါ
အဲလို လေးတွေရေးချင်လို့ဒီစာမျက်နှာ ဖြစ်လာတာပါ။
မနေ့ က တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ စက်ဘီးတို့ရန်ကုန်က လ ဆိုတာတွေ က ဘာပြောမှန်းမသိသူတွေ များနေမှာပါ
အဆိုတော်စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုခဲ့တဲ့ အပြာရောင်မျက်ရည်ဆို လည်း
အပျိုစင် မိန်းကလေး ရဲ့ချစ်သူ က သူချစ်သူ မျက်ရည် ကျတာ တစ်သက်မှာတစ်ခါ
ဒီလို မျက်ရည်ရဲ့ တန်ဖိုး က နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကျလို့မရလို့ကျတဲ့ မျက်ရည် မသုတ်နဲ့လို့ ပြောတာ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ တေး လည်း
တေးရေး တေးဆို ထူးအိမ်သင်ဆို သူ့ တစ်သက် သူ့ နှလုံးသား ကစီးဆင်းတဲ့ တေးတွေကိုပဲ ရေးခဲ့တာပါ ဆိုခဲ့တာပါ. တစ်ပါးသူ ရင်ဘတ်တွေ အသုံးချဖို့ အတွက် ဘာမှထွက်မလာ တာ သူ လောက ကို နုတ်ဆက်သွားတဲ့ အထိပေါ့
အတွေးတွေ အမျှင်တွေက ဆုံးမယ်မထင် နောက်မှဆက်ပါမည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:48 PM No comments:
တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ် တစ်ယောက် စက်ဘီးပြန်ရပြီး ရန်ကုန်မှာသာတဲ့ လ တန်ဖိုးရှိနေပြီလား
တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ် ကို ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်း ရေးစပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာ ကြားတော့
တစ်ချိန် က အရမ်းလေးစားရတဲ့ တေးသီချင်းတွေ ရသင့်တာတွေရ နေရင်တော့
အခု ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်း ကို ရေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်
အခုချိန်အထိ ထိန်းသိမ်း လာသော တေးရေးဆရာရဲ့လေးစားရသော အရေးအသား အတွက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း နိူင်ပါစေလို့ 
ပြည်သူအတွက် တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးပြုတေးများ သာတေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့တေးများ ကို စောင့်မျှော်လျက်
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:00 AM No comments:
မြန်ပြည်မှာ တော့ ရိုက်ဖမ်းတုန်းပဲ ဒီမိုကရေစီ ခပ်ဝေးဝေး
မိုးထိမိုးမိ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်များကို ရဲကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
Published on November 23, 2012 by ​အေး​နိုင်
နေပြည်တော်ကို လမ်းလျှောက်ချီတက်နေတဲ့ ရမည်းသင်းခရိုင် မိုးထိမိုးမိရွှေလုပ်သား တွေထဲက ၄ ဦးကို ဒီမနက်ပိုင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားသုံးပြီး ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ဆန္ဒပြသမားတဦးက ပြောပါတယ်။
ဖမ်းခံရသူ ၄ ဦးက ကိုရဲရင့်ထွန်း၊ ကိုနိုင်ဝင်း၊ ကိုနေဇော်ထက်၊ ကိုစောနောင်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ချီတက်ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့ ဒေါ်သန္တာအောင်က “မနက်က အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ၂၀ ပါတယ်။ ရှေ့မှာ ဒိုင်းတွေနဲ့ ဗိုလ်ကြီးတွေလည်းပါတယ်၊ ဗိုလ်မှူးတွေလည်း ပါတယ်။ သူတို့တတွေက ၀ိုင်းပြီးတော့မှဖမ်းတာ ဖြစ်တယ်။ ၄ ယောက်ကို ကျမတို့ရှေ့မှာပဲ ရိုက်နှက်ပြီးတော့မှ ဖမ်းသွားတယ်။ လက်ထိတ်တွေနဲ့လည်း တအားရိုက်တယ်။ နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့လည်း တအားရိုက်တယ်။ ဒရွတ်ဆွဲပြီးတော့ ဖမ်းသွားတယ်။ ၅ ယောက်၊ ၆ ယောက်လောက် ၀ိုင်းရိုက်တာ” လို့ ပြောပြပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:47 PM No comments:
ဂျပန်ဘဏ် အနုကြမ်းစီးသူ အား ရဲမှထိန်းသိမ်း
TOKYO: Japanese police said Friday they had stormedabank and arrestedaman who took five people hostage, with local media reporting he had demanded Prime Minister Yoshihiko Noda's cabinet resign.
Inatelevised news conference,apolice spokesman said the hostage-taker, identified as Koji Nagakubo, was arrested on suspicion of taking the five captive.
The 32-year-old man began the siege Thursday afternoon at the Zoshi branch of the Toyokawa Shinkin Bank in central Aichi prefecture.
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:07 AM No comments:
ဘဏ်ကို အနုကြမ်းစီးပြီး လူ၅ဦးအား ဓားစာခံထားပြီး ဝန်ကြီးချုပ် အားနူတ်ထွက်ပေးရန်တောင်းဆို
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:43 AM No comments:
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံမှာ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမင်္ဂလာပါ (မြန်မာဘာသာဖြင့် နှုတ်ဆက်သောကြောင့် ရယ်သံများနှင့် လက်ခုပ်သံများစွာ ဆူညံသွားသည်)
ဒီတက္ကသိုလ်ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်၊ ဒီနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ပထမဆုံး အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ရတဲ့ အတွက်လည်း ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဒီကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အရေးပါမှုကြောင့်ပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ဟာ အရှေ့နဲ့ တောင်အာရှရဲ့လမ်းဆုံမှာ တည်ရှိနေတာပါ။ ဒီနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ လူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့ နယ်ခြားလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ နှစ်ထောင်ချီတဲ့ သမိုင်းလည်းရှိတယ်၊ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြန်ဆုံးဒေသရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ကူညီနိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်းရှိနေတဲ့ နိုင်ငံပါ။
ကျွန်တော်ဒီကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရဲ့ လှပတင့်တယ်မှုနဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေ ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာ ရွှေရောင်လွှမ်းနေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဖူးမြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ အချိန်ဆိုတဲ့အရာကို လွန်မြောက်တဲ့ မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ-ကျွန်တော်တို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်ကာလကို သည်းခံမှု(ခန္တီ)နဲ့ ချစ်ခြင်း(မေတ္တာ) ဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဖွင့်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်ကို လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြေဟာ ဒီမြို့ဟောင်းကြီးရဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့ ရပ်ကွက်ဝန်းကျင်တွေကနေ ကျေးရွာပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်အထိ၊ ဟိမ၀န္တာတောင်ထွတ်ဖျားကနေ၊ ကရင်ပြည်နယ် သစ်တောတွေအထိ၊ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါးတွေအထိ ကျယ်ပြောတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။
ဥပဒေက ပြည်သူကို တာဝန်ခံတဲ့အတွက် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ တစ်ယောက်ရှိနေရင်တောင် အရမ်းများနေတဲ့၊ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ထက်မဆို ဥပဒေက ပိုအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အနာဂတ်။ ဘယ်ကလေးမှ စစ်သားအဖြစ် အလုပ်မခံရတဲ့၊ ဘယ်အမျိုးသမီးမှ နှိမ့်ချမဆက်ဆံခံရတဲ့၊ အန္တရာယ်ပြုရလွယ်တဲ့ သူတွေကိုတောင် သူတို့တွေက အားနည်းသူတွေဖြစ်ရင်တောင် ဥပဒေက ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အနာဂတ်ကို ခင်ဗျားတို့ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ စစ်ဘက်ကသာ အင်အားတောင့်တင်းစေတဲ့၊ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်သူတွေသာ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ အာမခံပေးတဲ့ အခြေခံဥပဒေတစ်ခုရှိတဲ့ အနာဂတ်၊ အဲဒီအနာဂတ်ဟာ ခင်ဗျားတို့ရောက်ရှိရမယ့် ခင်ဗျားတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အနာဂတ်ပါပဲ။
ကျွန်တော်ဒီကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ ဒီတက္ကသိုလ်ကို လေးစားမှုကြောင့်ပါပဲ။ ဒီကျောင်းမှာ ကိုလိုနီအုပ်စိုးမှုကို အတိုက်အခိုက်ပြုမှုဟာ ပထမဆုံး စတင်ခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို မဦးဆောင်မီ ဒီနေရာမှာ (ဗိုလ်ချုပ်)အောင်ဆန်းဟာ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကို တည်းဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကို မကွပ်ကဲမီ ဒီနေရာမှာ ဦးသန့်ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လားရာတွေကို ဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်က ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေ အားကောင်းခဲ့သလို ကျောင်းသားတွေဟာလည်း အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ အခုနေအခါမှာတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လွှတ်တော်က ဒီကျောင်းတော်ကြီးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သလို ဒီကျောင်းတော်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကို ပြန်လည်ရယူရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးက အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်ဒီကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံကြားက သမိုင်းကြောင်းကြောင့်ပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုတုန်းက အမေရိကန်က ကုန်သွယ်သူတွေ၊ ကုန်သည်တွေ၊ သာသနာပြုတွေဟာ ဒီနေရာကို လာပြီးတော့ ယုံကြည်မှု၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်မှုဆိုတဲ့ ကတိက၀တ်တွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းကလည်း ဒီနယ်ခြားတွေကို ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်မှူးတွေက ဖြတ်သန်းပြီးတော့ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းကို ၀င်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စစ်သည်များစွာရဲ့ အသက်တွေ ပေးဆပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာအောက်က ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရတာကို ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အမေရိကန်စင်တာတစ်ခု ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူမိသလို ဒီကျောင်းလိုမျိုး ကျောင်းကြီးတွေနဲ့ ပညာအပြန်အလှန် ဖလှယ်ခွင့်ရရင်လည်း ဂုဏ်ယူမိမှာပါ။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက်မှာလည်း အမေရိကန်တွေဟာ ဒီနိုင်ငံနဲ့ ဒီလူမျိုးအပေါ် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သံယောဇဉ် ရှိခဲ့ကြတာပါ။
ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ လူသားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပေါ်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာမှာ သူစိမ်းတွေလို ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ အမြဲတမ်း မျှော်လင့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရဲရင့်မှုကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။
ဒီနိုင်ငံဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုပဲ မတူကွဲပြားစွာ တည်ရှိမှုနဲ့ ကောင်းချီးပေး ခံထားရပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ တစ်ဒေသတည်းက လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ တစ်မျိုးတစ်စားတည်း ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မြို့ကြီးတွေ မြို့ငယ်တွေမှာ ဘုရားပုထိုးတွေ၊ ဗလီတွေ၊ ချာ့ခ်ျကျောင်းတွေ ဘေးချင်ယှဉ် တည်ရှိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သမိုင်းဇာတ်လမ်းမှာ ရာပေါင်းများစွာသော လူမျိုးစုတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီနယ်ခြားမျဉ်းတွေကြားမှာပဲ မရေတွက်နိုင်တဲ့ အသက်တွေ သေကြေပျက်စီးစေတဲ့၊ မိသားစုတွေ တစ်ကွဲတစ်ပြားဆီဖြစ်စေတဲ့၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကို ကွဲပြားသွားစေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး ပုန်ကန်ထကြွမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သလို အဲဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းမှာ ကြားခံနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ...
တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုတွေဆီကို အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ လည်ပတ်တာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းတွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ သံဃာတော်တွေက ငြိမ်းချမ်းစွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ကို ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့အတွက် သာမန်ပြည်သူတွေက ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ စုစည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သိခဲ့ရပါပြီ။ လွတ်လပ်မှုသံစဉ်ကို ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ် အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စည်းချက်တွေကိုလည်း သိခဲ့ရပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ မွေးရပ်နဲ့ မိသားစုတွေဆီကို ဘယ်တော့မှ အဆက်အသွယ် မပြတ်ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ၊ ပြည်ပမှာ သွားရောက်နေထိုင်သူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အဲဒါတွေအပြင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ ဂုဏ်သရေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စိတ်အားတက်ကြွခဲ့ရပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ခင်ဗျားရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ တောက်လောင်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လူသားကိုမှ အကျဉ်းချထားလို့ မရဘူးဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်တုန်းက အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်စိုးနေတဲ့ အစိုးရတွေဆီကို ''ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်သီးဆုပ်ကို ဖြည်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က လက်ကမ်းပေးမှာပါ'' လို့ ကျွန်တော် သတင်းစကားတစ်ခု ပါးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်းမှာ ပြဇာတ်ဆန်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေ စတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် ငါးစုလောက် အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုဟာ စတင်ဖြေလျော့လာပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဆန္ဒဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို အရပ်သားတစ်ဦးက ဦးဆောင်နေပြီး ပါလီမန်ကလည်း ကိုယ်တိုင်အားကောင်းမောင်းသန် ရပ်တည်နေနိုင်ပါပြီ။ တစ်ချိန်က တရားမ၀င် ကြေညာခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်း ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်း လွှတ်တော် အမတ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါပြီ။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ရာပေါင်းများစွာကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးသလို အဓမ္မခိုင်းစေမှုကိုလည်း ပိတ်ပင်ပြီးပါပြီ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ကနဦး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုတွေ ရခဲ့ပြီဖြစ်သလို ပိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ စီးပွားရေးအတွက် ဥပဒေသစ်တွေလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒါကြောင့် ဒီကနေ့မှာ ကျွန်တော့်ကတိစကားကို တည်ဖို့ ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါ။ မိတ်ဆွေဖြစ်မှုဆိုတဲ့ လက်ကမ်းဖို့ လာခဲ့တာပါ။ အမေရိကဟာ ရန်ကုန်မှာ သံအမတ်တစ်ယောက် ရှိနေပါပြီ။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြေလျော့ပြီးပါပြီ။ ပြည်သူတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အင်ဂျင်တစ်လုံးအဖြစ် ပါဝင်လည်ပတ် မောင်းနှင်ပေးနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိလှတဲ့ ခရီးဟာ အစပဲရှိပါသေးတယ်။ အများကြီး ရှေ့ဆက်သွားရဦးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် တိုးတက်မှုလေးတွေဟာ ငြှိမ်းသတ်ခံရတာမျိုး ဖြစ်သွားလို့ မရပါဘူး။ ဒီမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် တိုးတက်မှုကလေးတွေကနေ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် တောက်ပတဲ့ ဥတ္တရကြယ်တစ်စင်း ဖြစ်လာရပါမယ်။
အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး မအောင်မြင်ဘဲ ဘယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ အခုနေအချိန်အခါဟာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွေကနေ အရှည်တည်တဲ့ အခြေချနေထိုင်မှုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့၊ ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လို နေရာမျိုးတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်ဖို့အတွက် တကယ်ကို ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ဒီအားထုတ်မှုတွေဟာ ပိုပြီး မျှတရှည်ကြာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီကို ဦးတည်သွားရပါမယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ လိုအပ်တဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ နေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူတွေ အိမ်ပြန်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိဖို့ ဆိုတာလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဒီအားထုတ်မှုတွေမှာ ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်လည်း အရေးပါသလို ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မတူညီတဲ့ အရပ်ဒေသတွေကနေ လာကြတာ ဖြစ်ပေမဲ့လည်း တူညီတဲ့ အိပ်မက်တွေကို မျှဝေခံစားနေကြတာပါ။ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်တွေကို ကိုယ်ရွေးခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ခွင့်နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခွင့်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို မြတ်နိုးခွင့်တို့လို အိပ်မက်တွေပေါ့။ ဒါကြောင့် လွတ်လပ်မှုဆိုတာ အကောင်အထည်မရှိတဲ့ အိုင်ဒီယာမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ မဲပုံးတွေမှာတင်မကဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာပါ လူသားရဲ့တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးပေးတဲ့ တစ်ကယ့်အရာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး သမ္မတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖရန်ကလင်ဒီနာရုစဗဲ့က ဒီအမှန်တရားကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကရဲ့ အကြောင်းတရားဆိုတာ မဲတစ်မဲပေးခွင့်ထက် ပိုတယ်လို့ ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မဲပေးရုံသက်သက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့် လေးခုကို ကိုင်စွဲဖို့ ကမ္ဘာကြီးကို သူတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ ဆန္ဒစွဲတွေကနေ လွတ်မြောက်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုကနေ လွတ်မြောက်မှုတို့ပါပဲ။ ဒီလွတ်မြောက်မှု လေးခုဟာ တစ်ခုကိုတစ်ခု အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အားလုံးကို အမှန်တစ်ကယ် နားမလည်ဘဲ တစ်ခုကို အမှန်တစ်ကယ်နားလည်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အဲဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှာတဲ့၊ ပြည်သူအားလုံးအတွက်ရှာတဲ့ အနာဂတ်ပါပဲ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်မှာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါမှ သာမန်လူတွေရဲ့ အသံကို ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အစိုးရဟာ သူတို့ ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ရောင်ပြန်ဟပ် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက် ကတိစကားတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ ရာစုနှစ် နှစ်ခုကျော်လောက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့ကြရတယ်။ ကျွန်ပြုခံရသူတွေ လွတ်မြောက်ဖို့၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အာဖရိကန် အမေရိကန်တွေ မဲပေးခွင့်ရဖို့၊ အလုပ်သမားတွေ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခွင့်ရဖို့ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း တစ်ခြားတစ်နိုင်ငံမှာလည်း ပုံတူကူးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဟာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ ခွန်အားကိုသုံးနိုင်ရင် သန်စွမ်းလာမယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါကပဲ နိုင်ငံတွေအောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့အချက်ပါ။ အဲဒါကပဲ ဘယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု စမယ်ဆိုတာကို ဖြစ်စေတာပါ။
ပြည်သူတွေရဲ့ အတူတကွ စုဝေးခွင့်ကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေမယ့်အစား အပြည့်အ၀ လေးစားမှုပေးရပါမယ်။ ဖိနှိပ်ပိတ်ပင်နေမယ့်အစား မီဒီယာအပေါ် ဆင်ဆာလွှမ်းမိုးထားတာကို ဆက်ပြီး ရုပ်သိမ်းပေးရပါမယ်။ ဒီခြေလှမ်းတွေကို ဆက်လျောက်လာနိုင်တာနဲ့အမျှ ခင်ဗျားတို့ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံသားတွေက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့ အသံကို လျစ်လျူမရှုဘဲ နားထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တရားမ၀င်မလုပ်ဘဲ ပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကာလ အတွင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်တစ်ယောက်က ''ကျွန်တော်တို့မိဘတွေ၊ ဘိုးဘွားတွေ ဒီအတွက် စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါမှ မြင်မသွားခဲ့ရပါဘူး'' လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ အာဏာရှိတဲ့သူတွေဟာ အကန့်အသတ်ရှိမှုတွေကို လက်ခံရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေရိကန်စနစ်က အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာပါ။ အမေရိကဟာ ကမ္ဘာမှာ အင်အားအကြီးဆုံး စစ်ရေးအင်အား ရှိကောင်းရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ အရပ်ဘက် ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိရပါမယ်။ ကျွန်တော်က အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့ စစ်တပ်က လုပ်ဆောင်ရမှာကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ တစ်ခြားဟာတွေ သွားလုပ်ခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ သမ္မတအနေနဲ့သာမက တပ်မတော် စစ်သေနာပတိချုပ် အနေနဲ့ပါ ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ ပြည်သူတွေကို တာဝန်ခံရလို့ပါ။
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း သမ္မတအနေနဲ့ တစ်ခါတရံမှာ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ရင်တောင် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ဆန္ဒအတိုင်း လွှမ်းမိုးလို့ မရပါဘူး။ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင် အာဏာရှိသလို သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့အာဏာကို စစ်ဆေးပြီးတော့ ကျွန်တော့်အာဏာကို ဘက်မျှစေပါတယ်။ တရားသူကြီးအချို့ကို ကျွန်တော်ခန့်ရပေမယ့် သူတို့ဘယ်လို တရားစီရင်မလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အမေရိကမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ နေနေရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကနေ သမ္မတအထိ လူတိုင်းဟာ ဥပဒေအောက်မှာ သာတူညီမျှပါပဲ။ တရားသူကြီးတစ်ဦးဟာ ကျွန်တော် ဥပဒေချိုးဖောက်တာ ဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဥပဒေအတွက် အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ အမှောင်မိုက်ဆုံးကာလ အကျဉ်းချခံထားရစဉ်မှာ သူဟာကြောက်ရွံ့မှုမှ လွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းကို အက်ဆေးရေးခဲ့ပါတယ်။ အာဏာကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေက ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်ရွံ့ကြတယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ 'အာဏာကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေက ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်ရွံ့တယ်။ အာဏာကို အသုံးချပြီး ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေက အာဏာရဲ့ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကို ကြောက်ရွံ့ပါတယ်'။
‘ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေက ခင်ဗျားတို့ကို နောက်ကျန်ရစ်စေခဲ့ နိုင်ပါတယ်။ အာဏာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုဆီက လာတာမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဆီကနေ လာတာဆိုတာကို နားလည်လာနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ အခုအချိန်ဟာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပြီး အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်နေရမယ်လို့၊ ခုချိန်ဟာ ကွဲပြားခြားနားနေရမယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးခဲ့သလို 'ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူသားရဲ့ သဘာဝအခြေအနေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ' ကို ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘ၀ရဲ့ သဘာဝအခြေအနေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကမ္ဘာကို ခင်ဗျားတို့က ဒီနေ့ဖော်ပြနေပါပြီ။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဒီမှာ ရှိနေတာပါ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကို လာခဲ့တာပါ။ ...
ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ရဲ့ စနစ်ကို ဘာလို့ပြောပြရတာလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုရောက်အောင် သွားရမယ်ဆိုတာ အတွက်ပါ။ အနာဂတ်တစ်ခု၊ ဥပဒေက ပြည်သူကို တာဝန်ခံတဲ့အတွက် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ တစ်ယောက်ရှိနေရင်တောင် အရမ်းများနေတဲ့၊ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ထက်မဆို ဥပဒေက ပိုအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အနာဂတ်။ ဘယ်ကလေးမှ စစ်သားအဖြစ် အလုပ်မခံရတဲ့၊ ဘယ်အမျိုးသမီးမှ နှိမ့်ချမဆက်ဆံခံရတဲ့၊ အန္တရာယ်ပြုရလွယ်တဲ့ သူတွေကိုတောင် သူတို့တွေက အားနည်းသူတွေဖြစ်ရင်တောင် ဥပဒေက ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အနာဂတ်ကို ခင်ဗျားတို့ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ စစ်ဘက်ကသာ အင်အားတောင့်တင်းစေတဲ့၊ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်သူတွေသာ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ အာမခံပေးတဲ့ အခြေခံဥပဒေတစ်ခုရှိတဲ့ အနာဂတ်၊ အဲဒီအနာဂတ်ဟာ ခင်ဗျားတို့ရောက်ရှိရမယ့် ခင်ဗျားတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အနာဂတ်ပါပဲ။
အဲဒီခရီးမှာတော့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အားကောင်းစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို သုံးပြီးတော့၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ဖို့အတွက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စစ်ဘက်ကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာဖို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တိုးတက်အောင် အားထုတ်မှုတွေမှာ မိတ်ဖက်ဖွဲ့ပြီးတော့ အမေရိကဟာ ခင်ဗျားတို့ခြေလှမ်းတိုင်းကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်။ ခရီးစဉ် အရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဒုတိယလွတ်မြောက်မှုဖြစ်တဲ့ လူတွေဟာ ဆန္ဒတွေက လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ချဉ်းကပ်လာနိုင်အောင် ကူညီလာနိုင်လိမ့်မယ်။
ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတဲ့ အစာအိမ်တွေအတွက် အာဏာမဲ့ဖြစ်မှုဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်နဲ့ အစားထိုးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းကပြနေတာက ပြည်သူတွေရဲ့ အစိုးရ၊ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရ၊ ပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့ အစိုးရတွေဟာ ချမ်းသာဝပြောမှုဆိုတာကို ပေးစွမ်းနိုင်ရုံထက်ပိုပြီး အားကြီးတယ် ဆိုတာပါ။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့နဲ့ မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကို ရှာဖွေနေတာပါ။
သာမန်ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက် ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မြေကို ခင်ဗျားတို့လက်ထဲက ယူသွားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာ သေချာရမှာက ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူတွေမှာ အခြေခံကျတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အများစုရှိရပါမယ်။ ခင်ဗျားနေပြီး ခင်ဗျားအလုပ်လုပ်တဲ့ မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခေါင်းစဉ်တစ်ရပ်ရှိရမဲ့ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။
အရည်အချင်း အစွမ်းအစတွေ ထုတ်သုံးနိုင်လာတဲ့အခါ အခွင့်အလမ်းတွေဟာလည်း လူတိုင်းအတွက် ဖန်တီးနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကဟာ ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအပေါ် ပိတ်ပင်ထားမှုကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ အစိုးရကလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သလို စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းနေပါပြီ။ အခုနေအခါမှာ ခင်ဗျားတို့နယ်ခြားတွေကို ဖြတ်ပြီး ဓနဥစ္စာတွေ ပိုပြီးစီးဆင်းလာပါပြီ။ အဲဒါဟာ လူအမြောက်အများရဲ့ ဘ၀တွေကို မြင့်မားစေလာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုးမှာ လူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးရှိပြီး ခင်ဗျားကြိုးစားရင် ခင်းဗျားအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမျိုး ရှိလာရင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အတူ လျင်လျင်မြန်မြန် တိုးတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုးဟာ အကျင့်ပျက်ချစားမှုဆိုတာကို နောက်ချန်ထားနိုင်ပါမှ ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို ဖန်တီးမြှင့်တင်ရမှာ ဖြစ်သလို ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ စံပြုအနေနဲ့ဆိုရင် အမေရိကက ပြောနေတာက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကုမ္ပဏီတွေ အလုပ်လုပ်လုပ်ရင် ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြင့်မားတဲ့ စံနှုန်းတွေရှိရပါမယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့၊ အသေးစား စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခွင့်ပြုတဲ့ စီးပွားရေးကို ဖန်တီးပေးဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေ အားကောင်းလာဖို့၊ အလုပ်သမားတွေ သူတို့ရတာကို သူတို့ စုဆောင်းနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လို အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မကြာသေးမီက ခင်ဗျားတို့အစိုးရက ကျွန်တော်တို့ ပွင့်လင်းအစိုးရ မိတ်ဖက်ပြုမှုလို့ခေါ်တဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုရမှာပါ။ ဒါမှ နိုင်ငံသားတွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေကို မျှော်လင့်လို့ရမှာ ဖြစ်သလို ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လိုသုံးတယ်။ အစိုးရစနစ် ဘယ်လိုလည်ပတ်တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ နားလည်လာမှာပါ။
အထက်က ပြောခဲ့တာတွေ အားလုံးအတိုင်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသံတွေကို အစိုးရက ကြားတယ်ဆိုရင်တောင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေပြည်စုံဖို့ အဝေးကြီး လိုဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ ငတ်မွတ်နေသူတွေ၊ ဖျားနာနေသူတွေ၊ လျပ်စစ်မီး ဒါမှမဟုတ် ရေမရှိဘဲ နေနေရသူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ တွေအထိ ရောက်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အမေရိကန်ဟာ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လို့ ပြောတာပါ။
ဒီကနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ USAID ရဲ့ မစ်ရှင်တစ်ခုကို ဒီနိုင်ငံမှာ ပြန်လည်ထူထောင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ တစ်ချိန်က အာရှရဲ့ စပါးကျီဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီနိုင်ငံကို ကူညီရာမှာ၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ကျွေးမွေးနိုင်စွမ်းနဲ့ နာမကျန်းသူတွေကို ကုသနိုင်စွမ်းကို ပြန်လည်ထူထောင်ရာမှာ၊ ဒီနိုင်ငံက ကလေးတွေကို ပညာသင်ကြားရာမှာ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းအတိုင်း ခင်ဗျားတို့ ဆက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့အစည်းတွေကို တည်ထောင်ရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ မိတ်ဖက်အနေနဲ့ ကူညီချင်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံဟာ သဘာဝသယံဇာတတွေနဲ့ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဒီသယံဇာတတွေကို အလွန်အကျူး ထုတ်ယူခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးရပါမယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သယံဇာတရင်းမြစ်ဆိုတာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူတွေပဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မေ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပြည်သူတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ပဲ ဒီနိုင်ငံဟာ ပိုမိုသာယာဝပြောမှုဆိုတဲ့ တံခါးကို ဖွင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အလားအလာတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ အဲဒီနိုင်ငံက ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အားကောင်းမှု အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ အားကောင်းမှုပေါ်မှာ မှီတည်နေလို့ပါပဲ။
ပညာရေးဟာ အမေရိကန်အနာဂတ်အတွက် သော့ချက်ဖြစ်သလို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်လည်း သော့ချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသလို ခင်ဗျားတို့နဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေချဲ့ထွင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောင်းသားတွေ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ဖို့ မျှော်လင့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီက သင်ယူစေချင်သလို အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေလည်း ဒီကိုလာပြီး ခင်ဗျားတို့ဆီက သင်ယူစေချင်ပါတယ်။
ဒီအမှန်တရားကနေ ကျွန်တော်ဆက်ပြီး ဦးတည်ပြောချင်တာက ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ တတိယလွတ်မြောက်မှုပါပဲ။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ဆိုတာပါ။ ခင်ဗျားကြိုက်တာ ခင်ဗျားကိုးကွယ်ခွင့် ဆိုတာဟာ အခြေခံကျတဲ့ လူသားဂုဏ်သိက္ခာ အခွင့်အရေးပါပဲ။
ဒီနိုင်ငံဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုပဲ မတူကွဲပြားစွာ တည်ရှိမှုနဲ့ ကောင်းချီးပေး ခံထားရပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ တစ်ဒေသတည်းက လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ တစ်မျိုးတစ်စားတည်း ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မြို့ကြီးတွေ မြို့ငယ်တွေမှာ ဘုရားပုထိုးတွေ၊ ဗလီတွေ၊ ချာ့ခ်ျကျောင်းတွေ ဘေးချင်ယှဉ် တည်ရှိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သမိုင်းဇာတ်လမ်းမှာ ရာပေါင်းများစွာသော လူမျိုးစုတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီနယ်ခြားမျဉ်းတွေကြားမှာပဲ မရေတွက်နိုင်တဲ့ အသက်တွေ သေကြေပျက်စီးစေတဲ့၊ မိသားစုတွေ တစ်ကွဲတစ်ပြားဆီဖြစ်စေတဲ့၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကို ကွဲပြားသွားစေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး ပုန်ကန်ထကြွမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သလို အဲဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းမှာ ကြားခံနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။
အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး မအောင်မြင်ဘဲ ဘယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ (လက်ခုပ်သံများ) အခုနေအချိန်အခါဟာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွေကနေ အရှည်တည်တဲ့ အခြေချနေထိုင်မှုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့၊ ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လို နေရာမျိုးတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်ဖို့အတွက် တကယ်ကို ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ဒီအားထုတ်မှုတွေဟာ ပိုပြီး မျှတရှည်ကြာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီကို ဦးတည်သွားရပါမယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ လိုအပ်တဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ နေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူတွေ အိမ်ပြန်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိဖို့ ဆိုတာလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒုက္ခတွေအများကြီး ကြုံခဲ့ရသလို တင်းမာမှုအန္တရာယ်တွေ ဆက်ရှိနေမယ့် အလားအလာတွေလည်း မြင်နေရပါတယ်။ ကာလရှည်ကြာစွာပဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ရခိုင်တွေအပါအ၀င် ဒီပြည်နယ်က ပြည်သူတွေဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ခြွင်းချက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခင်ဗျားတို့မှာ ရှိသလို ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိသလို တူညီတဲ့ လူ့ဂုဏ်သရေဆိုတာ ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ ကံကြမ္မာအတွက် ဒီနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက် ဥပဒေမဲ့ ပြုမူမှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ တရားမမျှတတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီမှုနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားတာကို ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရှေ့ဆက်တဲ့နေရာမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ အဲသလို အမြင်မျိုးကို ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။
နိုင်ငံတိုင်းဟာ နိုင်ငံသားသတ်မှတ်ရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ အမေရိကဟာ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး ဒီနေ့အထိလည်း ဆက်ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားကလာတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေရဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကျွန်တော်တို့ သင်ယူနိုင်ခဲ့တာက တချို့သော မူဝါဒတွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် မှန်ကန်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ခင်ဗျားဘယ်လိုပုံရှိတယ်။ ခင်ဗျားဘယ်က လာတယ်။ ခင်ဗျားဘယ်ဘာသာရေးကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းပေါ်မှာ ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ မူဝါဒတွေပါ။ သူတို့ ဘယ်သူဖြစ်တယ်၊ သူတို့ ဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာ သက်သက်ကြောင့် သူတို့မိသားစုတွေကို ထိခိုက်မယ့် သူတို့အိမ်တွေ မီးလောင်ခံရမယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေမရှိဘဲ လူတွေနေထိုင်ခွင့်ပါပဲ။
ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကပဲ ခင်ဗျားတို့ပြည်ထောင်စုကို ဖွင့်ဆိုခွင့် အပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုက မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ အားနည်းချက်အဖြစ် မမြင်ဘဲ ခွန်အားအဖြစ် ကိုင်စွဲနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ဟာ မတူကွဲပြား ယဉ်ကျေးမှုတွေကြောင့် အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဒီအခွင့်အရေးကို အရယူရပါမယ်။ ဒီခွန်အားကို အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။
ကျွန်တော် ဘာလို့ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် တိုင်းပြည်၊ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ဘ၀က ဒါကို သင်ကြားပေးလိုက်လို့ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေ၊ မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူနဲ့ ဘယ်ဘာသာကိုမှ မယုံကြည်သူတွေ စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အကြောင်းကို ဘာသာစကားတိုင်းက ပုံသွင်းပေးပြီး ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းက ကြွယ်ဝစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရဲ့ ခါးသီးမှုကို မြည်းစမ်းခဲ့ကြရပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့သမိုင်းက လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲက မုန်းတီးမှုတွေ လျော့ကျပြီး လူမျိုးနွယ်တွေနဲ့ လူမျိုးစုတွေအကြား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ မျဉ်းတွေပျက်ပြယ်သွားတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြသခဲ့ပါပြီ။ ပြီးတော့ ဘာများကျန်ရစ်ခဲ့ပါသလဲ။ အမေရိကမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အများကြီးထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်နိုင်ငံတည်း၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်သူတစ်ရပ်တည်း ဆိုတာပါပဲ။ အချိန်နဲ့အမျှ ဒီအမှန်တရားဟာ ကျွန်တော်တို့ယူနီယံကို ပိုပြီးအင်အားကောင်းအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ချစ်မြတ်နိုးစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကို ချဲ့ထွင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာမှာ သြဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့အရှေ့မှာ ကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်။ ‘ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ အသားအရောင်ဟာ တစ်ခါတုန်းကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မဲပေးခွင့်ကို ငြင်းဆိုနေခဲ့တယ် ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ သူ့ရဲ့ကွဲပြားမှုတွေကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သလို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို ခင်ဗျားတို့လည်း ကျော်လွန်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကို ပေးမှာပါ။ ဒီနယ်နိမိတ်ပိုင်နက်အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူသားတိုင်းဟာ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံအကြောင်းရဲ့ တစိတ်တပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုခင်ဗျားတို့က လက်ခံကြိုဆိုရမှာပါ။ ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေကို ခင်ဗျားတို့က အသိအမှတ် ပြုမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အားနည်းချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာခွန်အားပါ။ ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့် နောက်ဆုံးသော လွတ်လပ်မှုဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့နေရာကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒါဟာ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကနေ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ လူသားနဲ့ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကြားထဲမှာ အင်အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ စစ်ပွဲတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ အတိတ်နဲ့ မတူတော့တဲ့ အနာဂတ်ကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စီးပွားရေးကို ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ပုံစံမတူတဲ့ လူတွေကို၊ နေရာမတူတဲ့ လူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ကိုးကွယ်မှုပုံစံမတူတဲ့ လူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ အမှောင်မိုက်ဆုံးကာလ အကျဉ်းချခံထားရစဉ်မှာ သူဟာကြောက်ရွံ့မှုမှ လွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းကို အက်ဆေးရေးခဲ့ပါတယ်။ အာဏာကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေက ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်ရွံ့ကြတယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ 'အာဏာကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေက ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်ရွံ့တယ်။ အာဏာကို အသုံးချပြီး ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေက အာဏာရဲ့ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကို ကြောက်ရွံ့ပါတယ်'။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဒီမှာ ရှိနေတာပါ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကို လာခဲ့တာပါ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဒီဒေသအတွက်သာမက ကမ္ဘာအတွက်ပါ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ လူတွေအများကြီးကို အားကျစေနိုင်တဲ့ ခရီးတစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ သွားနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ ပိုကောင်းတဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ပြောင်းလဲနိုင်မလားဆိုတာအတွက် ဒါဟာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါ။
အမေရိကန်ဟာ ပစိဖိတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ပစိဖိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အနောက်တိုင်းက ပြည်သူတွေနဲ့ စည်းနှောင်ထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာရင် ကြီးမားလှတဲ့ တိုးတက်မှုကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ရှာတွေ့မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ နေရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတွေကို စစ်ပွဲတွေက ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် လွှမ်းမိုးထားတာ အဆုံးသတ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဒေသဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ရပ် တည်ဆောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက် ဗဟိုချက်ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအကြား ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှု အလားအလာတွေ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ သမ္မတအနေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အာဆီယံကို လက်ခံကြိုဆိုရတာ အကြောင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒီဒေသမှာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်ဘ၀အချိန်အများစု ကုန်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ထက်ပိုပါတယ်။
အာဆီယံနဲ့အတူ နိုင်ငံတွေဟာ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေဟာ တိုးတက်နေပြီး ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ အစိုးရတွေဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေကြပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာတွေ၊ ကျွန်းတွေ၊ သစ်တောတွေ၊ မြို့ တွေ၊ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံ ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေအပေါ်မှာ တိုးတက်မှုတွေကို တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မတူညီမှုတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ၂၁ ရာစုဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်မှာပါ။
ဒီရန်ကုန်ကနေ အာရှအတွက် ကျွန်တော်သတင်းစကားတစ်ခု ပါးချင်ပါတယ်။ အတိတ်ရဲ့ အကျဉ်းချမှုတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုစရာ မလိုပါဘူး။ အနာဂတ်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ဖို့လိုပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နျူးကလီးယားလက်နက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်က လက်ဆန့်တန်းထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် ကွဲလွဲမှုတွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ ဖက်တွယ်ထားဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မြောက်ဘက်က အိမ်နီးချင်း တရုတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုးတက်မှုကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အနောက်ဘက်က အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာ အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံကြီးကြီးသေးသေး ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆို ဆောင်ရွက်ပြီး ပိုငြိမ်းချမ်းပြီး ပိုသာယာဝပြောတဲ့ ပိုပြီးတော့ တရားမျှတတဲ့ ပိုပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ အဲဒါအပြင် အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့ ၀တ္တရားတွေ သူ့နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆို မိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှာပါ။
‘ဒီလိုနိုင်ငံကို ဒီလိုကမ္ဘာကို ဒီသမိုင်းဝင်မြို့မှာ ခင်ဗျားတို့ စတင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ အထီးကျန်နေခဲ့တဲ့ ‘ဒီနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီလက်ချင်းယှက်သွားနေတဲ့ ခရီးကို နောက်တစ်ကြိမ် သွားနေပြီဆိုတာနဲ့ နိဒါန်းသစ်တစ်ခုရဲ့ စွမ်းအားကို ကမ္ဘာကို ပြသနိုင်မှာပါ။ ‘ဒီနိုင်ငံမှာ ခင်ဗျားတို့ ခုဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့ သူတွေလို အခွင့်အရေးကို မခံစားနိုင်တဲ့လူတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိထားပြီး ကျွန်တော်ပြောတာပါ။ လျှပ်စစ်မီးမရတဲ့ သူတွေ သန်းချီရှိနေပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံထားရပြီး လွတ်မြောက်လာဖို့ စောင့်စားနေရတဲ့ လူတွေရှိနေဆဲပါ။ ဒုက္ခသည်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ဟိုးမိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်နေဆဲ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နေနေရတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ပြည်သူတွေရှိနေပါတယ်။
ဆင်းရဲနေကြတဲ့သူတွေ၊ ၀ိုင်းပယ်ခံထားရတဲ့သူတွေ၊ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့သူတွေ၊ မေ့လျော့ခံထားရတဲ့ သူတွေ အပါအ၀င် ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ အမေရိကန် ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသံကို လူတိုင်းက ကြားနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကို သယ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို သယ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ ၂၁ ရာစုမှာ နည်းပညာ ကျယ်ပြန့်လာမှု၊ အတားအဆီးတွေ ပြိုလဲလာမှု၊ လွတ်လပ်မှုရဲ့ ရှေ့တန်းမျက်နှာစာတွေဟာ သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာတင် ဖြစ်ထွန်းနေတာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတွေနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းကြားမှာ ဖြစ်ထွန်းနေလို့ပါပဲ။
အကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦးက သူ့နိုင်ငံသားတွေကို ပြောတဲ့အခါမှာ အခုလို ထည့်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ 'နိုင်ငံရေးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အလုပ်ပဲ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်တင် မဟုတ်ဘူး။' အမေရိကန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောလေ့ရှိတာက ဒီမိုကရေစီအတွက် အရေးကြီးဆုံး ရုံးဟာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရုံးပါ။ သမ္မတမဟုတ်သလို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေပါ။
‘ဒီခရီးစဉ်ဟာ အလွန့်အလွန်ထူးခြားပြီး ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပြင်းထန်တဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလှတဲ့ ခရီးစဉ်လို့ ထင်ကောင်းထင်မှာပါ။ အဆုံးမှာတော့ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ဘာလဲလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမှာက ဒီနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေပါပဲ။ စစ်မှန်တဲ့ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားကိုယ်စီမှာ စတင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ဟာ လွတ်လပ်မှုကို ဖမ်းဆုပ်ရမယ့် သူတွေပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များစွာက ပြသခဲ့ကြတဲ့ သတ္တိမျိုးကို လိုအပ်နေပါတယ်။
စိန်ခေါ်မှုကြီးတွေကတော့ ရှေ့ခရီးမှာ ရှိနေမှာပါ။ အပြောင်းအလဲရဲ့ အင်အားကို တောင့်ခံနေကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ငံဟာ နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်တော့တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံကို မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ၊ ကမ္ဘာအတွက် ဧရာမ ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကျွန်တော် ဒီမှာရှိနေတာပါ။ အဲဒါတွေအပြင် ဒီခရီးရှည်ကြီးမှာ အမေရိကန်ဟာ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ မိတ်ဖက်အဖြစ် ရှိနေမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။(မြန်မာဘာသာဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြား)
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:21 PM No comments:
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရတ်ဟူစိန် အိုဘားမားဟာ ဒီနေ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ မှ မိန့် ခွန်း အသံဖိုင် မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:30 AM No comments:
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရတ်ဟူစိန် အိုဘားမားဟာ ဒီနေ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ မှ မိန့် ခွန်း
အမေရိကန်သမ္မတ မြန်မာမြေ အလည်လာရောက်
အမေရိကန်သမ္မတ ဒုတိယသက်တမ်း မှာ
ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်ဆောင်ကို အားပေးဖို့မြန်မာမြေ အလည်လာရောက်
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်ဆောင်နေတာ ကို အထောက်အပံ ဆန်သလို အင်အားတတ်အောင် ဒီမိုကရေစီလုပ်ဆောင် နိူင်ငံကို ခွန်အားဖြစ်စေမှာမလွဲ ပေ။
မြန်မာပြည် အကုန်ပြောင်းနေလို့ လာတာမဟုတ်ပဲ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံသစ်တစ်ခုပေါ်လာတာကို အားပေးတာသက်သက်အတူ
ဒီမိုကရေစီမြန်ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမေရိကန် ရှိနေတာ ကို ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပေမည်။
ကိုးဒီသွေး မှ ဓာတ်ပုံ
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် အာစရိ ပူဇော်ပွဲ
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:58 PM No comments:
အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး ရဲ့သမုဒယကျောင်း (၁)(၂)
မူပိုင်ကတော့ http://www.youtube.com/watch?v=dgdgKxzKlqA ကသွားယူတင်ထားတာပါ...
အာအိုင်တီ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ဖြစ်ဖူးသူတိုင်း ခံစားလို့ ရနိူင်ပါစေ...
အထူးသဖြင့် အဆိုတော်ခင်မောင်တိုး နှင့်တကွ ကျောင်းရှေ့ ကတိုင်းလုံးရေအပြည့် နီးပါးနေသွားသော နောင်တော်ကြီးများအား သတိတရဖြင့်..ကူးယူတင်ပြပါသည်။
အဆိုတော်ခင်မောင်တိုး သရုပ်ဆောင်ဒွေး တို့ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:55 AM No comments:
သတင်းတွေ တင်တော့ တခါတလေ ရေးချင်တာတွေ အပြုသဘော ရေးမိတော့
ဝေဖန်ရေးလည်းမဟုတ် ဆိုတော့ ကောင်းစေချင်လို့ ရေးတာ ဆိုပေမဲ့ 
မကောင်းတာ တွေ ပါသွားရင်
သတင်း ကို သတင်းလို့ တင်ပြီး ရေးချင်တာတွေ ကို တော့
မြင်တာ တွေ ကို ရေးရင်း
ကွင်းသွား လို ချင်သူ တွေ အတွက် ကွင်း သွား လို့ရအောင်
လို့လေဘယ်လ် ထိုး ပြီး ရေးနေတာပါ။
Barack Obama meets his staff in Air Force One Conference Room
အင်တာနက် ဘာဖြစ်လို့ ဈေးသက်သာစေချင်လာလဲဆိုတော့
အင်တာနက် ဈေးသက်သာတာ က ဘာကို အကျိုးပြုမှာလည်းပေါ့
မိုဘိုင်းဖုန်း နဲ့ အင်တာနက် ဈေးသက်သာရင်
မြန်ပြည်ရှိ ပညာ ရှာလိုသူတွေ မြန်ပြည်မှာရော နိူင်ငံတကာမှာပါ ထဲထဲဝင်ဝင် ခြေဆန့် လို့ ရလာမှာပါ
မြန်ပြည်ပညာရေး အဆင့်တစ်ခု ကို လှမ်းဖို့ အတွက် ခြေလှမ်းဖြစ်လာမှာပါ။
နယ်တွေ မှာဆို ဆရာ မရှိလို့မိမိဖာသာမိမိ စာအုပ် ကို နားလည်အောင်ကြည့် ကျက်ပြီး ၁၀ တန်းကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ရွှေဂွန်း က ဒဿမတန်းကျောင်းသား RIT ကို ရောက်အောင် တစ်ချို့ ဘာသာရပ်တွေ ကို ကျက်မှတ်ရင်း အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားခဲ့တာ အများထက် ပိုကြိုးစား ရတာပါ။သူငယ်ချင်း ရွှေဂွန်း ကို အမှတ်ရမိသေးတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း ရေနံအင်ဂျင်နီယာနဲ့ ကျောင်းပြီးတော့ Master တန်းတတ်ချင်လို့သွားမေးတော့ မိမိပိုက်ဆံနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်လို့ မရဘူးတဲ့ ။အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ရင် မရဘူးတဲ့။
အဲဒီအချိန်မှာတစ်ချို့ တွေကတော့ နိူင်ငံတကာ မှာ မာစတာတန်းသွားတတ်ဖို့ သူ့ အဆက်အသွယ်နဲ့ သွားနေကြတာပေါ့။ သွားမေးလို့ ကတော့ နည်းလမ်းမပြောပြချင်ကျဘူးလေ။
အဲလိုနဲ့ရေနံအင်ဂျင်နီယာ အလုပ် ကို မန်းရေနံမြေ မှာ နှစ်နှစ် အလုပ်လုပ်ပြီး အင်တာနက် ကနေနေ စင်ကာပူ ကကျောင်း ကို စာရွက် တွေပရင့်ထုတ် အင်တာနက် ကစာတွေ ဖတ် ပြီး ကျောင်း အတွက် လျှောက် လိုက်တာ Master တန်းတတ်ဖို့ ရလိုက်ပါတယ်။
မြန်ပြည် ခဏပြန်တော့ ကိုယ်လိုပဲ မာစတာတန်းတတ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရင်း ကြိုးစားသူ နှစ်ယောက် ကို အင်တာနက်ကနေ ကျောင်းလျှောက်တာပြောပြရင်း သူတို့ လည်း နောက်တစ်တန်းမှာ မာစတာတန်းတတ်ခွင့်ရပြီး မာစတာ တွေ တောင်ပြီးသွားလို့နိူင်ငံခြားမှာ အခြေချနေလေရဲ့ ။
အင်တာနက် မရှိလို့မာစတာတန်း ကို ကျောင်းပြီးလို့၎နှစ်လောက်ကြာမှ တတ်လို့ ရပါတယ်။
အင်တာနက် ကနေ ကျောင်းသားတွေ စာတွေဖတ်လေ့လာမယ်ဆိုရင် အချိန်သက်သာ ပြီး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေမှာပါ။
၁၀ တန်းကျောင်းသား တွေ ဆရာမရှိပေမဲ့ အင်တာနက်ဈေးသက်သာရင် စာ ကို ဘယ်လို ဖတ်လို့ လေ့လာလို့ ရမှာပါ။
မြန်မာပြည် က စကိုင်းနက်တောင် အင်တာနက် ရှိရင် ဘယ်နေရာမှာမဆို ကြည့်လို့ ရနေပါပြီ။
နယ်ဘယ်လောက်ဝေးဝေး အင်တာနက် ဈေးသက်သာ လာတာနဲ့ အမျှ ပညာတတ်တွေ ပညာလိုလားသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး ဈေးသက်သာစွာနဲ့ပညာဆည်းပူးလို့ ရနိူင်သောနေရာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းပြောတာတွေ ထက် ပညာရချင်သူတွေ အတွက် အရေးပါသော အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နိူင်ငံ အကျိုးပြုဖို့ က များသော အင်တာနက် ပါ...
ဒါကြောင့် အင်တာနက် ဈေးသက်သာ မှ မြန်ပြည် တိုးတတ်မှု ကို မြန်ဆန်စေမှာပါ။
မြန်ပြည်သားတိုင်းလက်ထဲ သတင်းအချက်အလက်တွေနည်းပညာတွေ လျင်မြန်စွာရောက်နိူင်ပါစေ။
ငလျင် အတွက် ဆောင်ထားရန် ရှောင်ရန် အချက်တစ်ချို့ 
ငလျင် ဖြစ်လာလျှင် တော်တော်များများ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်
ကြိုတင်ပြီး ဘာလုပ်လို့ ရသလဲ ဆိုတော့
ရေဗူး တွေ ကို အိမ်အပြင်မှာ ဆောင်ထားရပါတယ် ၂ လီတာဗူး တွေ ကို အဆင်ပြေသလောက် တစ်ပတ်စာ သောက်စရာ ရှိအောင် မိမိ မိသားစု လူဦးရေ ကို တွက်ပြီး ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်
အစာ ကတော့ အစာခြောက် အထုပ်တွေ အစာဗူးတွေ ကြာကြာထားလို့ ရတဲ့ အစာတွေ တစ်ပတ်စာ နှစ်ပတ်စာလောက် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်
အိမ်သာသုံးစက္ကူ ရယ် ပလပ်စတစ်အိတ်တွေ အလေးသွားရန် လိုအပ်လျှင်သုံးရန် ဆောင်ထားရပေမည်
အပြို အပျက်တွေ နဲ့အလေးသွားရန် အခက်အခဲတွေ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်စေရန် အတွက်သာ။
အေးသောဒေသဖြစ်ပါက အလူမီနီယံစ ၃ ပေ ၆ပေ လောက် လူတစ်ကိုယ်စာ လူတစ်ယောက်လျှင် တစ်ခု နှုန်းဖြင့် ဆောင်ရပေမည်
မီးလောင်လျှင် အပူဒဏ် အေးလျှင် အအေးဒဏ် ခံနိူင်ပေမည်။
ဆေးအမြဲသောက်ရသူများ ဆေး ကို အလွယ်တကူ ထုပ်ပိုးထားပြီး မိမိ နှင့် တစ်ပါတည်းဆောင်ထားရပေမည်။အလွယ်တကူ ရနိူင်သောနေရာတွင်ထားရပေမည်။
အရက်ပျံ။လိမ်းဆေး။ဒဏ်ရာ သက်သာစေသော ဆေး။
မိုးရွာလျှင်မိုးလုံစေသော ပလပ်စတစ်စ။ ၆ ပေပတ်လည်နီးပါး။
မိသားစုဝင်များကို တစ်ခုခုဆိုလျှင် ဆုံမိဆုံမှတ် ကွင်း။နေရာ။ကျောင်း။ကြိုတင်ပြောကြားထားခြင်းများရှိရပေမည်။
မိမိအိမ်တွင် မိမိ အိပ်သော နေရာထက်မြင့် ဘီဒို စင် တို့ ကို ပြောင်းပြီးအိပ်သောနေရာ နှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ထားရပေမည်။
အိမ်တံခါးများ ကို ငလျင်လှုပ်သည်နှင့် ဖွင့်ထားရပေမည်။
ဖြစ်နိူင်လျှင် မိမိထက်မြင့်သောစင် ဘီဒို ရှိသော နေရာတွင် မအိပ်အပ်ပေ။
ငလျင်လှုပ်လျှင် အိမ်အပြင်သို့အန္တရာယ် မရှိလျှင် ပြေးထွက် နိူင်က ပြေးထွက်ပြီး ကွင်းပြင်တွင် ငလျင် ကို ရှောင်သင့်သည်။
အိမ်ထဲမှ ပြေးမထွက် နိူင်လျှင် စားပွဲခုံအောက်တွင် ခိုနေသင့်ပေသည်။
မြန်ပြည်တွင် ငလျင်ဒဏ်ခံ အဆောက်အဦး နောက်ပိုင်း ဆောက်လာလျှင် ငလျင်ဒဏ် ကို တော်ရုံဆိုလျှင် ကြောက်စရာရှိမည်မဟုတ်ပေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:18 AM No comments:
ငလျင် သတိထားဖို့ဆောင်ရန် မြန်ပြည် အတွက်သာ
အိမ်ထဲမှာဆိုလျင် စားပွဲခုံ အောက်တွင် ခိုဝင်ရန်
အရပ်ထက်မြင့် သောနေရာကို ရှောင်ရန်
ဓာတ်မီးအသေး ဆောင် ရမည်
ရေဒီယို က သတင်းသိရှိရန်
မိမိရောက်နေသောနေရာ မှ အသံပြုပြီးဖြစ်စေမည်
ဓာတ်မီး က ပြိုကျ နေလျှင် မှောင်လျှင် သုံးရန်
ခရာသည်အပျက်အစီးပိမိလျှင် အသံပြုရန်
ရေဗူး ကတစ်ခုခု ဆိုလျှင် သောက်ရန် ကိုယ်နှင့် မကွာ ဆောင်ထားပြီး
အစာခြောက် ကအရေးပေါ် စားရန်ဆောင်ရပေမည်။
ဆေးဝါးဒဏ်ရာ အတွက် ဆေးဝါး ဗူး ဆောင် ထားသင့်ပေသည်။
ဓာတ်မီး နှင့် ခရာ
ရေဗူး နှင့် အစာခြောက်
ဆေးဝါး ဗူး ကိုယ်နှင့် မကွာ ထားဖြစ်အောင်ဆောင်ထားနိူင်ပါစေ။
ငလျင် က နံနက် က နေ ညနေရော ပါ ဖြစ်နေသဖြင့်
ငလျင် ထပ်မံ ဖြစ်နိူင် သဖြင့် သတိထားလျှင် အကောင်းဆုံးပါ
ငလျင် လှုပ်တာပြင်းအား ပျော့ လာပြီး ရက်ခြားလာလျင် အနည်းငယ် စိတ်ချရပေမည်
သံလိုက်စက်ကွင်း တိုင်းတာ တာ ရှိလျှင် ထပ်မံဖြစ်မဖြစ် စောသိနိူင်ပေမည်။
သံလိုက်စက်ကွင်း ပုံမှန်နှင့် မတူ ကွာခြားသည်ဟု ၂၀၁၁ ခု ၃ လ ပိုင်း ၁၁ ရက်နေ့က အဖြစ် ကို တိုင်းတာ ချက် ကွာခြားတာ ကို တွေ့ ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။နောက်ပိုင်း မှသိရသော အဖြစ်ပါ။လေ့လာတွေ့ ရှိချက်ကို ပြောပါသည်။
အနီးဆုံး ကွင်းပြင် ကို ရှာဖွေပြီး ဆုံမှတ် အဖြစ်
မိမိ မိသားစုဝင် များကို ပြောပြထားရပေမည်။
မြန်ပြည် ငလျင် ဒဏ်မှ ကင်းဝေးနိူင်ပါစေ
ယနေ့နံနက်၇နာရီ၄၅ခန့်က ရွှေဘိုမြို့မှ၅၆ကီလိုအကွာတွင်ပြင်းအား၆.၆ရှိငလျင်တခု လှုပ်ခတ်သွားကြောင်းသိရသည်။
ရဲရင့်(ကနေဒါ) ... 11/10/2012
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:57 AM2comments:
ဂျပန် မှာ နီပေါနိူင်ငံသား ကို ၁၅ နှစ်ကျော် မှားယွင်းဖမ်းဆီး
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:13 AM No comments:
● ၁။ (က) လူမျိုးစုတစ်စုနှင့် သက်ဆိုင်သော။ ethnic minorities/groups/communities m ethnic unrest/clashes. (ခ) ဇာတိ၊ မျိုးနွယ်အားဖြင့် တိုင်းပြည်၊ ဒေသ တစ်ခုခုနှင့် သက်ဆိုင်သော။ ethnic Turks. ၂။(approv) (အထူးသဖြင့်) ဥရောပ၊ အမေရိကန်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်သော။
iOS 6.0.1 ကတော့ ထပ်လာပြီ
နောက်ထပ် update လုပ်ဖို့iOS 6.0.1 ကတော့ လာပြီ
သို့ သော် လမ်းပျောက်နေဆဲ
ပါနိုရာမား ကင်မရာ ကတော့ အိုင်ဖုန်းတွေ အတွက်ကောင်းပါတယ်
မေးလ် ကတော့ ဖတ်ရင်စောင့်ပေရော့ 
အိုင်ဖုန်း ၅ အတွက်တော့ ကောင်းပါတယ်
ကျန်တာတွေ ထက် လမ်းပျောက်တာ တော်တော် ကို ဆိုးတာ
ဖုန်းလေးသုံးပြီး နေရာ ရှာ လို့ ကတော့
နိူင်ငံတောင် ကျော်သွားတာ ပါသေး
အိုင်ဖုန်း5မဟုတ်သူတွေ ကတော့
တင်ကို ထပ်မတင်သင့် ပါဘူး
အရမ်းကို လေးသွားပြီးတော့ကောင်းတာ နည်းနည်း
နှေးတာ လိပ်တောင် အကို ခေါ်လောက်တယ်
မြန်မာလို ကလည်း မရဆိုတော့
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:49 PM No comments:
မြန်ပြည် ကို ဝါးတားတား ဟိုအခွင့်အရေး ဒီအခွင့်အရေးဆိုတာထက် မြန်ပြည် အရေးမြန်ပြည်သားတွေသာ သာဆိုင်
မြန်ပြည် ကို အခုမှဟိုဟာသိသလို ဘာလိုလို ဆိုနေတာထက်
မြန်ပြည်တိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင် နေတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် မှာ ဟိုအခွင့်အရေး ဒီအခွင့်အရေး မပြောပဲ
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ကို စော်ကားလိုက်တာပါ
ဟိုအခွင့်အရေး ဒီအခွင့် အရေး အော်ချင်ရင်
ဘယ် နိူင်ငံသားတွေ လာ ပြောသလဲ
အဲဒါတွေက အခု လပိုင်း နှစ်ပိုင်း ကမှ စတာ မဟုတ် နှစ် ၆၀ ကျော်ပြီ
အဲမှာ အရင်ပြောပြီးမှ အခု အဖြစ်အပျက်တွေ ကို သွားပြော
နိူင်ငံတကာ အထောက်အပံ သတင်းဌာန တွေ အရင် အာဏာရှင် အောက်ဆွဲ သတင်းဌာန တွေ ထက် မြန်ပြည်သား စစ်စစ်တွေ
မြန်ပြည်မှာမွေး လာသူ စစ်စစ်တွေ အတွက် ဘယ် နိူင်ငံသားတွေ က ဘာအခွင့်အရေးပေးလို့ လဲ
သူ အခွန်ဆောင်လို့ကိုယ်ပိုက်ဆံ ကို ကိုယ် ကိုပြန်ပေးတာ ကို များ အခွင့်အရေးပေးသလို နဲ့ 
ကိုယ်ပိုက်ဆံ ကို သူ ပိုက်ဆံ လိုလို နဲ့ 
မြန်ပြည်သားတိုင်း ကိုယ့်အခွင့်အရေး ကိုယ်တိုင်ပြန်ရနိူင်ပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:37 PM No comments:
ဂျပန်က ဒေတာ နဲ့ ငွေကောက်တာ ကို ဒီလိုသုံးတော့
ဒေတာနဲ့ အင်တာ နက် ကို ဖုန်းဖိုးကောက်တော့
အကန့် အသတ်မရှိသုံး ကို မြန်မာငွေ ၄၄၁၀၀ ကျပ်သာ ပေးရပါတယ်
ဒေတာမှာ သုံးတာ ပေးရမယ့် ငွေ က မြန်မာငွေနဲ့ ဆို
၄၅ သိန်း ကနေ သိန်း ၆၀ အထိ လစဉ်ကျပါတယ် အဲဒါ ကို အကန့် အသတ်မရှိသုံး လုပ်တော့ ၄၄၁၀၀ ပဲ ပေးရပါတယ်
အခု စာရေးတာ ကို လည်း ဖုန်းကနေ web စာမျက်နှာ ကို တင်နေတာပါ
လွန်ခဲ့ သော ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ကတည်းက စာရေးတင်လို့အသံဖိုင် အရုပ်ဖိုင် ဓာတ်ပုံ တွေ လွယ်လွယ် တင်လို့ ရပါတယ်
ဒေတာ ကို အဲလို သုံးမှ တန်ပါတယ်
အခု နောက် အိုင်ဖုန်း ၅ ဆို LTE ချက်ချင်းမရတာရယ် နေရာတိုင်းမရတာရယ် ဒေတာ ကို ကန့် သတ်တာရယ် အင်တာနက် ဈေး များ တာတွေ က
အိုင်ဖုန်း ၅ ရယ် LTE ကို အပြည့် မရတာရယ် နည်းပညာ ရယ်ဆော့ဝဲယာ က လမ်းပျောက်စေတာ က
ဒေတာ နဲ့က နည်းနည်းသုံးသူ အတွက် ဈေးများပေမဲ့
များများသုံးသူ အတွက် အိမ်လုံခြုံရေးပါ အချိန်မရွေးမြင်နေရတာပါ
ဒေတာ ကို အားရပါးရ သုံးတတ်သူ မြန်ပြည်သား များဖြစ်နိူင်ပါစေ
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:15 PM No comments:
အင်တာနက် ဒေတာ နဲ့ဆိုတော့
တကယ်တော့ အခု နောက်ပိုင်း နည်းပညာလေး ကောင်းလာ ရုံရှိသေး
ဖုန်းကို ဖုန်းလိုင်းကျော်ပြီးအင်တာနက်ကနေ ဖုန်းခေါ်တာ ကို ဖိနှိပ်ချင်လို့ဒေတာ နဲ့ ကောက်ဖို့ ဖြစ်လာ တာ နေမှာ
ဒေတာနဲ့ကောက်မယ်ဆို ရင်
ဖုန်းခေါ်တာ တွေ က ဒေတာ အရမ်းတတ်ပါတယ်
ဒေတာ ကောက်ရင် ADSL လိုင်း က အနိမ့်ဆုံး ဈေး နဲ့တစ်လကို အင်တာနက် အမ်လစ်မစ်တတ် သုံး လို့ရရပါတယ်
အခု ဆို တစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင်ပဲ ရှိပါတယ်
အဲလို မှ မဟုတ်ရင် နည်းပညာ ပိတ်ပင်ဖို့ ဒေတာ နဲ့ ကောက်တာ သိသာ ပါတယ်
အခု အင်တာနက်ဖိုး က တစ်လ ကို တစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်းကျော် ကို ကျတာပါ
တနာရီ ကို ၂၄၀ ကျပ် ဆိုတော့ ဈေးများပေမဲ့ 
နည်းပညာနဲ့နယ်တွေ ကို ဒေတာ တွေ ပုံတွေ ပို့ ရတာ
စာသင်ကျောင်းတွေ ခေတ်နဲ့ တပြေးညီ သွားဖို့ ရှိသေးတာ ကို
ဈေးများလိုက်တာနဲ့နယ်က စာသင်ကျောင်းတွေ အင်တာနက်ပျောက်
ခေတ်ပညာတတ်တွေ ဝေးကွာ သွားမှာပါ
ဖုန်းလေးနဲ့ကလေး တွေ ကို နိူင်ငံတကာ တိုးတတ်တာ ကို ပြလို့ ရတာ ကို ပိတ်သလို ဖြစ်သွားမှာပါ
မြန်ပြည် အနာဂတ် ကလေးတွေ အင်တာနက် မသိရင် ဒေတာ နဲ့ငွေ့ကောက်တာ ဈေးများလို့ ပါ
ကလေးတွေ ဗဟုသုတ နည်းအောင် လုပ်လို့ ရတာ ဆက်သွယ်ရေးပါ တိုးပွားအောင် အထောက် အကူ ပေးတာလည်း ဆက်သွယ်ရေးပါ
ဒေတာ များများ သုံးချင်တဲ့ သူ က ဖုန်း နဲ့အားမရပါဘူး
ADSL လိုင်း နဲ့ဖုန်းပြော လုပ်တာပါ
ဒေတာ ကို 5GB လောက် အထိ ကို မြန်မာငွေ တစ်သောင်းမကျော်ရင်တော့
ဆက်သွယ်ရေးက မြန်ပြည် ကလေးတွေ အနာဂတ် ကို အားပေးတာပေါ့
မြန်ပြည် ကို နည်းပညာ အသစ်လည်းမလာ
ကလေး ဘဝ တွေ လည်း အင်တာနက် က ဈေး များတယ်
ဖုန်း ဆို တာ ခလောက်သာသာ လူတွေ လည်ဆွဲ ပဲဖြစ်နေမှာပါ
ဒေတာ နဲ့ ဆို ဈေးများလာ တော့ နိူင်ငံတကာ ကို မြန်ပြည် က အင်တာ နက်ဖုန်းပြော တာ ဈေး များလာ မှာ ဆိုတော့
နိူင်ငံ ၄၀ လောက် ကို အလကား ဖုန်းခေါ်လို့ ရတာ ကို ရေးပါမယ့်
Fring ကို ငွေ သွင်း ရင် ၁၀ ဒေါ်လာ မသွင်းပဲ
၇ ဒေါ်လာပဲသွင်းရင် တစ်လ အတွင်း နိူင်ငံ ၄၀ ကို အလကားခေါ်လို့ ရပါတယ်
စင်ကာပူဖုန်းဆိုရင် mobile ရော အိမ်ဖုန်းရော ခေါ်လို့ ရတာပါ
သတိထားရမှာ က ဒေတာ နဲ့ ငွေ ကောက်မှ သုံးသင့် ပါတယ်
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ နဲ့ညှိ မှာ စိုးလ်ု့ ပါ
ဒေတာ နဲ့ ဆို မလိုပါဘူး
နိူင်ငံတကာ ခွင့်ပြုရသော လိုင်းပါ
အဲက်ပယ်က ငွေထည့် ကဒ်ဝယ်ထည့် တာ နဲ့ ငွေ သွင်းလို့ ရပါတယ်
ဘာခရက်ဒစ်တွေ မှ မလို ပါဘူး
iphone ရော စမတ်ဖုန်းရော ဖုန်းတော်တော်များများ မှာ သုံးလို့ ရပါတယ်
မြန်ပြည် အင်တာနက် ဈေးများရင် နိူင်ငံတကာ ကို ငွေဈေးသက်သာတာ ကို ရေးတာပါ။
Mobile ဖုန်း အင်တာနက် အလကားပေးသုံးတော့မယ်
အရင်က တမိနစ် ၂ ကျပ် တို့၎ ကျပ်တို့ပေါ့
နောက်ဆို ဒေတာပလန် နဲ့သွား တော့ မှာဆို တော့
အင်တာနက် တတ် တာ ဝိုင်ဝိုင်း က က နေရင် တော့ ဒေတာ က မတတ် နဲ့ 
အလကား သုံး ရတော့မှာပါ
နိူင်ငံတကာ က မေး ရင်
မြန်ပြည် ဖုန်း အင်တာနက် အလကား ပေါ့
အရမ်းတော် လိုက်တာ ဘယ်လို တွက်တာလည်းမသိ ပိုသက်သာတယ်...
အခု မုန်လာဥ အခု ကန်စွန်းဥ နောက်ဆုံး မီးလောင်ဖု ကသက...
တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ် တစ်ယောက် စက်ဘီးပြန်ရပြီး ...
မြန်ပြည်မှာ တော့ ရိုက်ဖမ်းတုန်းပဲ ဒီမိုကရေစီ ခပ်ဝေ...
ဘဏ်ကို အနုကြမ်းစီးပြီး လူ၅ဦးအား ဓားစာခံထားပြီး ဝန...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် အမေရိကန်သမ္မ...
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရတ်ဟူစိန် အိုဘားမားဟာ ဒီနေ့ ရန်ကုန...
Barack Obama meets his staff in Air Force One Conf...
ဂျပန် မှာ နီပေါနိူင်ငံသား ကို ၁၅ နှစ်ကျော် မှားယွင...
မြန်ပြည် ကို ဝါးတားတား ဟိုအခွင့်အရေး ဒီအခွင့်အရေးဆ...